Manchester United oo diyaarisay liiska lix macallin oo si ku meel gaar ah usii leylin karta illaa dhammaadka xilli ciyaareedka - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
By admin November 25, 2021 7
(Manchester) 25 Nof 2021. Naadiga Manchester United ayaa wali raadinaysa macallin si ku meel gaar ah u leyliya kooxdeeda inta ka harsan xilli ciyaareedkan maadaama ay adkaatay inay durba hesho macallin si toos ah ula wareegi kara shaqadeeda.
Sidaas darteed, waxay haatan diyaarisay diiwaan ka kooban lix magac oo ay dooneyso inay ku qanciso inay Red Devils usii maamulaan si ku meel gaar ah inta ka dhimman fasalkan.
Wargeyska The Mirror oo baahiyay sheekadan ayaa xusay inay diiwaanka ku jiraan macallimiinta kala ah Ernesto Valverde, Ralf Rangnick, Paulo Fonseca, Lucien Favre iyo Rudi Garcia kuwaasoo ay wada-xaajood la sameysay, waxaana diiwaanka lix ku ah Michael Carrick oo haatan majaraha u haya safka kooxda kaddib ceyrintii Ole Gunnar Solskjaer.
Si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa ku hungowday inay gacanta ku dhigto Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers iyo Erik Ten Haag kuwaasoo dhammaantood bartilmaameed u ahaa qoyska reer Glazer oo iska leh kooxda ku ciyaarta Old Trafford, waana sababta ay haatan ku meel gaar u raadineyso.
Al-Shabab blast by school in Somali capital kills at least 5 – The Washington Post
At least five killed as huge explosion, gunfire rocks Somali capital – Reuters
RASMI: Lionel Messi oo uu dhaawac soo gaaray… (Halkee ayuu ka xanuunsanayaa xiddiga PSG?)